Shaandhooyinka boorsada dhabarka ee aquariums -ka: moodooyinka ugu waxtarka badan uguna aamusan | Ee kalluunka
Miirayaasha boorsada dhabarka ayaa ah ikhtiyaar wanaagsan oo loogu talagalay quraaradda quraacda, mid weyn ama mid yar, wax macno ahna ma laha haddii aad tahay aar -yaqaanka ku cusub dunida kalluunka ama leh khibrad weyn. Waxay yihiin aalado aad u dhammaystiran oo badiyaa bixiya saddex nooc oo shaandhayn ah, marka lagu daro astaamo kale oo aad u xiiso badan.
Maqaalkan waxaan kaga hadli doonnaa shaandhooyinka shandadaha kala duwan ee kala duwan, waxay yihiin, sida loo doorto iyo xitaa noocyada ugu fiican. Oo, haddii aad xiisaynayso mawduuca oo aad rabto inaad si qoto dheer u wargeliso naftaada, waxaan kugula talineynaa inaad akhrido maqaalkan kale ee ku saabsan miirayaasha quraaradda.
1 Shaandhooyinka boorsada ugu fiican ee aquariums -ka
2 Waa maxay shaandhada boorsada
3 Faa'iidooyinka iyo waxyeellooyinka shaandheeyayaasha noocan ah
4 Noocyada shaandhada shandada ee ugu fiican
5 Sida loo doorto shaandhada boorsada dhabarka ee quraaraddayada
5.1 Kalluunka quraaradda
5.2 Cabbirka Aquarium
5.3 Nooca quraaradda
6 Waa maxay shaandhada boorsada ugu aamusnaanta badan?
7 Ma gelin kartaa shaandhada boorsada haanta kalluunka?
Shaandhooyinka boorsada ugu fiican ee aquariums -ka
Sifeeyaha Fluval C2
FILTER -KA KALIYAHA ...
SunSun CBG-500 Filter ...
Boorsada AstroAqua-Filter ...
Eden 501 - Shaandheyn ...
Waa maxay shaandhada boorsada
Miirayaasha boorsada dhabarka waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan shaandhooyinka quraaradda. Sida magacu tilmaamayo, waxay ka laalaadaan mid ka mid ah geesaha quraaradda, sida boorsada dhabarka. Hawlgalkeedu waa mid sahlan, maadaama ay si fudud u nuugaan biyaha oo ay dhex maraan shaandheeyayaashooda ka hor inta aysan u oggolaan inay soo dhacdo, sidii inay tahay biyo -dhac, dib ugu soo laabto taangiga kalluunka, mar horeba nadiif ah oo aan lahayn wasakh.
Shaandhooyinka boorsada dhabarka Waxay badiyaa ku jiraan saddex nooc oo kala shaandheeyeyaal ah kuwaas oo mas'uul ka ah samaynta shaandhaynta ugu badan ee ay u baahan yihiin aquariums -ku. Shaandhaynta farsamada, marka ugu horreysa ee biyuhu maraan, shaandhayntu waxay ka saartaa wasakhda ugu weyn. Shaandhaynta kiimikada, walxaha ugu yar ayaa laga saaraa. Ugu dambayntii, shaandhaynta bayoolojiga waxaa lagu abuuray dhaqan bakteeriya oo u beddelaya walxaha waxyeelaynaya kalluunka kuwo aan dhib lahayn.
Faa'iidooyinka iyo waxyeellooyinka shaandheeyayaasha noocan ah
Miirayaasha boorsada dhabarka waxay leeyihiin tiro faa'iidooyinka iyo khasaaraha taasi waxay noqon kartaa mid waxtar leh markaad dooranayso inaad hesho shaandhaynta noocan ah iyo in kale.
Shaandhaynta noocan ahi waxay leedahay a faa'iidooyin tiro badan, gaar ahaan ku saabsan isku -duubnaanteeda, taas oo ka dhigaysa tallaabo ku habboon qof kasta oo bilaaba:
Waxay yihiin a alaab aad u dhamaystiran iyo is -weydaarsi weyn oo sida caadiga ah ay ku jiraan saddexda nooc ee shaandhaynta ee aan ka faalloonnay (farsamo, kiimiko iyo bayooloji).
Waxay u muuqdaan inay leeyihiin a Qiimaha la hagaajiyay.
Aad bay u yihiin fududahay in la isku ururiyo oo la isticmaaloTaasi waa sababta loogu talinayo bilowgayaasha.
Ha qaadan meel bannaan gudaha quraaradda.
Ugu dambayn, si caadi ah dayactirkiisu ma aha mid aad qaali u ah (Marka la eego waqtiga, in ka badan ama ka yar laba toddobaad waxay ku xiran tahay awoodda iyo wasakhda ku urursan quraaradda, iyo lacagta).
Si kastaba ha ahaatee, filter noocan oo kale ah waxay leedahay waxoogaa khasaare ah, gaar ahaan la xiriira noocyada aan u muuqan inay u dulqaadan karaan sidoo kale kuwa kale:
Shaandhooyinka noocan ah laguma talinayo aquariums -ka cawska leh, maadaama ay nuugi karaan.
Ku socota kalluunka betta sidoo kale ma aha mid xamaasad lehmaadaama shaandhayntu keento biyo hadda socda oo ay ku adag tahay inay dabaashaan.
El shaandhaynta kiimikada waxay u egtahay inaysan aad u fiicnayn ama, ugu yaraan, inaanay keenin natiijo wanaagsan sida labada kale.
Sidoo kale, boorsada dhabarka ayaa mararka qaarkood waxoogaa ma fiicnamaadaama ay dib u celin karaan biyaha ay hadda dhaansadeen.
Noocyada shaandhada shandada ee ugu fiican
Suuqa waxaan ka heli karnaa saddex summadood oo boqorad ah marka ay timaado shaandhaynta boorsada kaas oo mas'uul ka noqon doona shaandhaynta biyaha ku jira quraaradda -quraaradda ilaa ay u ekaato diyaarado dahab ah.
Waxaan hore uga hadalnay Miirayaasha AquaClear dhawaan. Shaki kuma jiro in ay tahay astaanta ugu talinta badan khubarada iyo aquarists -yaasha labadaba. In kasta oo ay u muuqato inay leedahay qiime xoogaa ka sarreeya kuwa kale, tayada alaabteeda waa mid aan muran lahayn. Kala -shaandheeyaasheeda ayaa loo qaybiyaa iyadoo loo eegayo awoodda ku jirta litir biyo ah oo ku jira quraaraddaada. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale iibiyaan qalabka dayactirka sifeeyayaasha (isbuunyada, dhuxusha ...).
Miirayaasha summaddan waxay shaqayn karaan sanado iyo sidoo kale maalinta koowaad. Waxa kaliya oo aad samayn doontaa dayactir sax ah si aanu mishiinku u gubin.
Eheim Filter Dibadda ...
Nooc Jarmal ah oo wuxuu ku fiican yahay soo saarista alaabada biyaha la xiriirta, ha ahaato aquariums ama beero. Shaandheeyaasheeda, nadiifiyeyaasha quruuruxa, caddeeyayaasha, quudiyaha kalluunka ama kululeeyayaasha quraaradda ayaa si gaar ah u taagan. Waa astaan ​​aad u xiiso badan oo aan kaliya iibinaynin aaladda, laakiin sidoo kale qaybo dabacsan iyo culeysyo shaandheeyaasheeda.
Waxa xiiso leh, bambooyinkii biyaha ee soo -saarahaan, oo markii hore loogu talagalay aquariums -ka, ayaa iyaguna jira iyadoo la adeegsanayo duruufaha xisaabinta si loo qaboojiyo adeegayaasha si joogto ah, buuq yar iyo hab wax ku ool ah.
Tidal waa astaan ​​kale oo tayo sare leh oo aan ku iibsan karno shaandhooyinka boorsada dhabarka loogu talagalay quraaraddayada. Waa qayb ka mid ah Seachem, shaybaar ku yaal Maraykanka oo si gaar ah loogu talagalay alaabada kiimikada, tusaale ahaan, kiciyeyaasha, kontaroolka fosfate, tijaabooyinka ammonia ..., inkastoo ay sidoo kale ku jirto bambooyin biyo ama shaandheeyeyaal.
Miirayaasha Tidal waxay caan ku yihiin bixinta astaamo aan ku jirin sumado kale miirayaasha, tusaale ahaan, heerka biyaha ee la hagaajin karo ama nadiifiyaha qashinka ku urura biyaha dushiisa.
Sida loo doorto shaandhada boorsada dhabarka ee quraaraddayada
Doorashada shaandhada boorsada dhabarka ku haysa baahideena iyo tan kalluunkayaga ayaa iyaduna caqabad noqon karta. Taasi waa sababta aan tan kuugu soo bandhignay talooyin taxane ah oo maanka lagu hayo:
Iyada oo ku xidhan kalluunka aan ku haysanno quraaradda, waxaan u baahan doonnaa hal nooc oo shaandheyn ah ama mid kale. Tusaale ahaan, sidaan nidhi, iska ilaali shaandhooyinka boorsada dhabarka haddii aad haysato kalluun caws ama betta ah, maadaama aysan jeclayn shaandheeyayaashan gabi ahaanba. Dhinaca kale, haddii aad haysato kalluun weyn oo markaa aad u wasakhaysan, dooro shaandhada boorsada dhabarka oo leh sifeyn farsamo oo aad u xoog badan. Ugu dambayntii, sifeynta bayoolojiga wanaagsan ayaa aad muhiim ugu ah aquariums -ka kalluunka badan leh, maadaama haddii kale dheelitirka jilicsan ee nidaamka deegaanka uu burburi karo.
Qiyaasta quraaradda waa si lamid ah muhiim marka aad dooranayso shaandhayn ama mid kale. Taasi waa sababta ay aad muhiim u tahay, ka hor intaadan go'aan ka gaadhin hal nooc ama mid kale, inaad xisaabiso awoodda ay leedahay quraaraddaadu iyo inta biyo ah ee aad u baahan tahay shaandhaynta si aad u socodsiiso saacaddii si aad u nadiifiso. Jidadka, shaandhooyinka boorsada dhabarka ayaa si gaar ah ugu habboon aquariums -yada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Ugu dambeyntiina, sidoo kale waa fikrad wanaagsan in la tixgeliyo meesha aad ku ridi doonto quraaradda, maadaama shaandhayntu u baahan doonto meel yar oo geeska ku taal, sidaa darteed wax dhib ah ma leh inaad eegto cabbiraadaha haddii, tusaale ahaan, aad quraaradda ka soo horjeeda derbiga.
Dhab ahaantii nooca quraaradda dhibka kuma aha shaandheyaasha boorsada, taas lidkeeda, tan iyo Sababtoo ah kala -duwanaanshahooda, waxay aad ugu habboon yihiin qol kasta. Xitaa waxaa lagu talinayaa in lagu beero biyo -biyoodyada, maadaama tuubada ay ku nuugaan biyaha ay aad u fudud tahay in lagu qariyo haramaha. Si kastaba ha ahaatee, xusuusnow in hadda ay soo saareen noocyada shaandheeyayaashu ay aad u xoog badan yihiin.
Waa maxay shaandhada boorsada ugu aamusnaanta badan?
Aad bay muhiim u tahay in la doorto a shaandhaynta aamusan haddii aanad rabin inaad culays saarto kalluunkaaga… Ama xitaa naftaada, gaar ahaan haddii aad haysato quraaradda qol. Dareenkan, sumcadaha ugu caansan ee bixiya shaandhooyinka aamusan waa Eheim iyo AquaClear.
Si kastaba ha noqotee, xitaa sidaas shaandhayntu waxay soo saari kartaa qaylo iyo xanaaq xitaa iyada oo aan cillad lahayn. Si looga fogaado:
Sii mishiinka waqti si uu ula qabsado. Dhowr maalmood ka dib markii shaandheyn cusub la sii daayo, mishiinka waa inuu joojiyaa buuqa badan.
Hubi taas ma ahayn dhagxaan ama wax hadhaaga ah ayaa ku xayiran taasi waxay keeni kartaa gariir.
Waxaad sidoo kale sameyn kartaa wax dhex dhig dhalada iyo shaandhada si aad uga fogaato gariirka.
Haddii waxa ku dhibaa ay yihiin biyo -dhaca biyahaas nadiifta ah ee ka soo baxa shaandhada, isku day inaad heerka biyaha aad u sarrayso (waa inaad buuxisaa saddexdii ama afartii maalmoodba mar) si sanqadhu u noqoto mid aad u daran.
Ma gelin kartaa shaandhada boorsada haanta kalluunka?
In kasta oo ay jiraan shaandhooyin boorsada dhabarka ah oo si gaar ah loogu talagalay aquariums nano, runtu waa taas haanta kalluunka oo leh shaandho isbuunyo ah ayaa nagu filan. Sidaan kor ku soo sheegnay, shaandhooyinka biya -dhaca waxay keenaan qulqul xoog leh oo si xun u saamayn kara kalluunkeenna ama xitaa dili kara, tusaale ahaan haddii ay yihiin haley ama kalluun ilmo.
Taasi waa sababta ay aad ugu fiican tahay in aan doorano a shaandhada isbuunyada, maadaama aysan lahayn bamka biyaha si shil ah u liqi kara kalluunkayaga, wax ay suurtogalnimadiisu si xad -dhaaf ah u kordhiso ayaa ka yar meesha bannaan. Shaandheeyeyaasha isbuunyada ayaa ah waxa magacoodu tilmaamayo: isbuunyo biyaha shaandhaysa iyo, qiyaastii laba toddobaad oo la isticmaalo ka dib, sidoo kale waxay noqotaa shaandhayn bayooloji ah, maadaama ay ku jirto bakteeriya faa'iido u leh habdhiska haanta kalluunka..
Dhinaca kale, Haddii aad leedahay haan weyn oo kalluun, waxaa jira shaandheeyeyaal matoor leh., laakiin loogu talagalay meelaha leh mugga biyo aad u yar.
Waxaan rajaynaynaa inaan kaa caawinnay inaad si fiican u fahanto adduunka shaandhooyinka shandadaha ee maqaalkan. Noo sheeg, waligaa ma isticmaashay sifeynta noocaan ah? Waa maxay khibradaadu? Miyaad ku talinaysaa summad gaar ah ama moodel?
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Gargaarka » Shaandhooyinka boorsada boorsada quraaradda